नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) (प्रचण्ड–माधव समूह)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई बीच गोप्य छलफल भएको छ। उनीहरू बीच आन्दोलनमा कार्यगत एकतालगायत पार्टी एकीकरणसम्मको विषयमा छलफल भएको हाे।
प्रचण्ड र बाबुरामबीच छलफल : नेकपामा होला त बाबुरामको इन्ट्री ?
फेरि मिल्छन् त प्रचण्ड र बाबुराम ? (भिडियो रिपोर्ट)
त्यस्तै प्रचण्ड र भट्टराई आजै उपरराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनलाई भेट्न उनकाे निवास पुगेका छन्। पछिल्लाे समयकाे राजनीतिक अवस्था बारे छलफल गर्न पूर्व माओवादी नेताहरू भेला भएकाे बताइएकाे छ।
प्रचण्ड र बाबुराम उपराष्ट्रपति निवासमा
उपराष्ट्रपति पुन सक्रिय : प्रचण्ड र बाबुरामसँगै पूर्वमाओवादी मिलाउने कसरत